November 25, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Cayaaraha November 25, 2020
(Yurub) 26 Nof 2020. Waxaa caawa la ciyaaray ciyaaro aad u xiiso badan ee ka tirsan kulamada afaraad wareega Group-yada tartanka Champions League ee xilli ciyaareedkan 2020/21. Kooxaha Real Madrid, Liverpool, Man City, Bayern Munich iyo Atletico Madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii ugu muhiimsanaa ee caawa ciyaaray kulammadii koobka horyaallada Yurub. Naadiga reer Spain […]Sii akhriso
(Manchester) 25 Nof 2020. Manchester City ayaa guul ka soo heshay kooxda Olympiacos oo ay ku booqatay garoonka Karaiskaki Stadium, kaddib markii ay kaga soo adkaatay 0-1, ciyaar qeyb ka aheyd Kulamo ka tirsan heerka Guruubyada ee tartanka Champions League. Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay 0-1 ay ku hoggaamineysay kooxda martida aheyd ee […]Sii akhriso
Ethiopian Forces Surround Tigray’s Capital as a Decisive Battle Looms – The Wall Street Journal
Ethiopia News November 25, 2020
Ethiopian Forces Surround Tigray’s Capital as a Decisive Battle Looms The Wall Street Journal African Envoys Head for Ethiopia Where Thousands of War Dead Reported U.S. News & World Report Rise and fall of Ethiopia’s TPLF – from rebels to rulers and back The Guardian Ethiopia war destabilising east Africa, warns Sii akhriso
(Madrid) 25 Nof 2020. Shaxda rasmiga ah kulanka Kooxaha Inter Milan iyo Real Madrid ee tartanka UEFA Champions League ayaa la shaaciyey. Kooxda Inter Milan ayaa soo dhaweyn doonta naadiga Real Madrid si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan kulamada Afaraad wareega group-yada ee tartanka UEFA Champions League xilli ciyaareedkan 2020/21. Waxaa la shaaciyey safafka […]Sii akhriso
An Ethiopian Boutique Showcasing Artisanal Design – The New York Times
An Ethiopian Boutique Showcasing Artisanal Design The New York TimesSii akhriso
Soomaaliya November 25, 2020
Muqdisho (SONNA) Sida lagu qoray Daily mail halyeygii hore ee Xulka kubadda cagta Argentina Diego Armando Maradona ayaa goordhow ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Tigre ee dalka Argentina kadib markii uu asiibay wadno xanuun. Maradona oo ahaa 60 jir wuxuu ka mid ahaa xirfadyahanadii ugu sareeyay ee abid soo maray kubadda cagta, waxaana […]Sii akhriso
(Argantina) 25 Nof 2020. Halyeeygii kubadda cagta adduunka ee reer Argentina ee Diego Armando Maradona ayaa geeriyooday isaga oo 60 jir ah. Sida ay wararku sheegayaan Diego Armando Maradona ayaa si deg-deg ah wadnaha u istaagay isagoo ku sugan gurigiisa ku yaalla Tigre, waxaana isla markii la geegay dhakhtarka si loo xaqiijiyo inuu geeriyooday iyo inkale. […]Sii akhriso
African envoys head for Ethiopia where thousands of war dead reported – Reuters
African envoys head for Ethiopia where thousands of war dead reported Reuters Ethiopian PM rebuffs mediation attempts as Tigray deadline nears The Guardian How Abiy Ahmed’s Ethiopia-first nationalism led to civil war Al Jazeera English Biden’s NSA pick Jake Sullivan warns of ‘war crimes’ risk in Sii akhriso
Muqdisho (SONNA)-Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Bari Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud “Anagu waxaan u baahanahy dhallinyaro aqooon leh oo u adeega dalka iyo dadka Soomaaliyeed, kuna biira ciidamada Dowladda” Taliyaha Qeybta Booliska Gobalka Bari ayaa hadalkaani ka yiri mar uu maanta ka qeybgalay xaflad ay ku qalin badalanayeen arday dhammaysatay heerka Sii akhriso
Muqdisho (SONNA)-Hay’adda FAO ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Beeraha iyo cunada ayaa sheegtay in ay iminka daciiftay oo ay tabar dareysay duufaanta GATI ee xeebaha bari ee Soomaaliya ku dhufatay 22 bishaan November. Duufaanta ayaa xawaaraheedu yaraaday 12-saac ee la soo dhaafay, iyada oo dhanka waqooyi galbeed u jiheysatay. Warbixinta ay hay’adda FAO soo Sii akhriso